Heano Ako Email Mazano eiyo Mwaka wezororo wa2014 Martech Zone
Imeyili inongova yechipiri kutsvaga kutonga mukutengesa panguva yezororo. Vashambadziri vari kubata, kuwedzera kuwedzera kweemail nekukatyamadza 13 muzana gore-pamusoro-gore pakati pegore ra2012 na2013. Hapana mubvunzo isu tichaona kunyange nhamba dzichikwidzwa zvakare gore rino saka uchafanirwa kugadzirira. Izvi infographic kubva kuemail Monks inopa matipi akasimba uye mamwe makuru anotsigira data kuti akubatsire kutanga izvozvi.
Sleigh mabhero ari kurira uye ndiyo nguva ikozvino yekubata ino inoshamisa mwaka wezororo nekutengesa neemail. Putira iyo 2014 Q4 mune dhizaini nemari inodzvova uye yekugadzira email mishandirapamwe! Usakanganwa, email yaive imwe yenzira dzakabudirira kwazvo dzekutaurirana kwevatengesi mu2013.
Isu takangogovana mashoma zvikanganiso zvakakomba iwe unofanirwa kudzivirira muchirongwa chako chekushambadzira email uye iyi infographic inoidzokorora! Matipi anosanganisira kuona kuti iwe une yakanaka inopindura nharembozha email template, sanganisa kuedza kwako ne kusimudzira zororo remagariro, gadzirira zvimwe zvakadzikiswa, uye uparadzire maemail ako mukati memwaka wese kuti uve nechokwadi chakanyanya kuvhurika mitengo kune avo vanononoka kutenga!
Oo, uye hazvina kunyanyokurumidza kutanga. Kupfuura hafu yevashambadzi veemail vakatanga zvavo kusimudzira maholide maemail kutanga kwaSeptember kutora hafu yemusika uyo unotanga kushandisa kutanga. Usakanganwa kugovera iyo zvidzidzo zvakadzidziswa kubva mwaka wegore rapfuura wezororo uye vamwe maitiro akagovaniswa mwaka uno ikozvino.
Tags: 2014 nguva yezororoemail infographicemail kutengesa mazanoemail mamongipurogiramu yezororoinfographicnhare inopindura dhizaini